Iindiza eziya eBourgas, Zakynthos, Brussels, Chania, Larnaca, Paris nasePorto kwiWizz Air ephinda yazisa ngeBudapest
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Iindiza eziya eBourgas, Zakynthos, Brussels, Chania, Larnaca, Paris nasePorto kwiWizz Air ephinda yazisa ngeBudapest
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Iindaba zaseBelgium zokuPhula • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zaseBulgaria zokuPhula • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseFransi ezaphulayo • Iindaba zaseGrisi zokuPhula • IHungary Iindaba eziPhulayo • iindaba • IPortugal Breaking News • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • Intetho yezoKhenketho • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Ukujongana nokhuphiswano, uWizz Air waphinda wavula ikhonkco likaBudapest kwiZakynthos ngeCawa, ejoyina ezinye iinkonzo zempelaveki e-Brussels Charleroi, eChania, eLarnaca, eParis Orly nasePorto.
Ukuphinda kuqaliswe kwakhona yayikukungena kwakhona kwesango laseHungary okokuqala ngeBulgaria.
I-Wizz Air iphinde yavula amakhonkco kabini-ngeveki ukuya eBourgas, isixeko sesibini ngobukhulu eBulgaria kunxweme loLwandle oluMnyama.
I-Wizz Air iyakwazi ukukhulisa amanani eenqwelomoya njengoko izithintelo kuhambo ukuya nokubuya eBudapest kuncitshisiwe.
I-Wizz Air iphinde yaqala ngeenkonzo ezisixhenxe ukusuka Isikhululo senqwelomoya saseBudapest Kwimpelaveki ephelileyo, ukuphinda andise inethiwekhi yaseYurophu kwisikhululo seenqwelomoya kunye nokunikezela abathengi ukhetho ngakumbi lokuhamba kwakhona. Enye into eyaziwayo yayikukuphinda uqhagamshelwe ngesango laseHungary neBulgaria, njengoko umphathi ophethe ngexabiso eliphantsi (ULCC) evula amakhonkco kabini ngeveki ukuya eBourgas, isixeko sesibini ngobukhulu belizwe kunxweme loLwandle oluMnyama.
Ukujongana nokhuphiswano, Wizz Air waphinda wavula ikhonkco likaBudapest kwiZakynthos ngeCawa, ejoyina ezinye iinkonzo zempelaveki e-Brussels Charleroi, eChania, eLarnaca, eParis Orly nasePorto.
UBarázs Bogáts, iNtloko yoPhuhliso lweeNqwelo moya, kwisikhululo senqwelomoya saseBudapest uthi: "Inani leendawo ezibuyela kwimephu yethu yendlela iyanda kwaye zonke izixeko ezikhulu e-EU kungekudala ziya kubakho kwakhona njengoko sijonge phambili ekwazisweni kwe-EU Green ID."
Ukuqhubeka nokwenziwa kwayo ngokutsha eBudapest, kunye nokuqinisekisa ukunyuka kwamaxesha amaninzi kwimephu yendlela, ukuphela kukaJulayi uWizz Air uza kubhabha aye kwiindawo ezingama-50, esebenza ngeenkonzo ezili-148 ngeveki eziya kuthi zibonelele ngezihlalo eziphantse zibe ngama-31,000 ngeveki ezivela kwikomkhulu laseHungary.
I-Wizz Air, ebandakanywe ngokusemthethweni njenge-Wizz Air Hungary Ltd. kwaye yenziwa isitayile njenge-W! ZZ Air, yinqwelomoya enexabiso eliphantsi e-Hungary kunye ne-ofisi yayo eyintloko e-Budapest. I-airline isebenza kwiidolophu ezininzi eYurophu, kunye neendawo ezithile eMntla Afrika nakwi-Middle East.